Ukuzijwayeza kwe-Semalt: Imiphumela emibi yegama elingukhiye lokugxila
UJack Miller, Semalt iMenenja yeMpumelelo yeKlayenti Ephezulu, uthi uma kuziwa ekubhaleleni izihloko ze-SEO-friendly, ukugxila igama elingukhiye ngokuvamile kubhekwa njengento ebalulekile. I-Google, i-Bing, ne-Yahoo ayithandi, futhi akufanele usebenzise ngaphezulu amagama angukhiye kokuqukethwe kwakho kunoma yiliphi izindleko. Ezinsukwini zokuqala ze-SEO, ukugxila igama elingukhiye kwakuyinto esetshenziselwe ukusebenza kahle futhi yasiza abakwa-webmasters ukuba babe nezinga eliphezulu kule imiphumela yokusesha . Lezi zinsuku, ukuthambekela kushintshwe yilo lonke, futhi awukwazi ukuthuthukisa isimo sakho nge-stuffing engukhiye - pc temp control. Ngaphandle kwalokho, i-Google ingase ijezise isayithi lakho futhi ivinjelwe impilo yakho yonke uma ubhala ama-athikili angukhiye abhalwe phansi.
Yini engalungile ngokugxila igama elingukhiye?
Kuphephile ukusho ukuthi igama eliyisihluthulelo ukugxila esetshenziselwa ukuba ngumkhono we-SEO omhlophe, kodwa manje kucatshangwa ukuthi kuyisiqalo se-SEO esimnyama. I-Matt Cutts evela ku-Google ithi inkampani izama konke okusemandleni ukuhlukanisa phakathi kwezinto eziphezulu nezokuqukethwe okuphansi. Noma ubani owenza igama elingukhiye ukugxilisa noma ukusebenzisa amasu angaphezu kwe-SEO kuzodingeka ahlupheke ngokushesha noma kamuva. I-Google ihlale ibuka amawebusayithi aneqophelo elihle kakhulu nokuqukethwe okufundisayo. Le nkampani inezinjini ezimbalwa eqenjini layo ezisebenza ekuvimbeleni ukugxilongwa kwegama elingukhiye futhi maduzane zizophoqa amasayithi ahileleke kulokhu khohlisa.
Esinye sezingozi eziyisisekelo ukuthi i-Google izokwehlisa izinga lekhasi lakho lesayithi.Izikhundla ukuthi izosuswa noma zihlawulwe emiphumeleni yenjini yokusesha. Kuthiwa, akukho ukusetshenziswa ukugxila kuningi lamagama angukhiye. Kunalokho, kufanele uzame ukugcina ikhwalithi yamakhasi akho wewebhu futhi usebenze kumazwi angukhiye kuphela uma kudingeka.
Okunye okuphazamisayo ukuthi leli gama eliyisisekelo lokugxila ngeke lithande amakhasimende akho nezivakashi eziningi. Akufanele ukhohlwe ukuthi bafuna ukufunda izinto zokuzibandakanya, ezifundisayo neziwusizo. Uma unezinqwaba zamagama angukhiye futhi unqatshelwe ngekhwalithi, awukwazi ukufika okulindelekile futhi awukwazi ukuvula izivakashi zakho zibe amakhasimende ajabulisayo.
I-Keyword Optimization esebenza:
Kuyiqiniso ukuthi ukusebenzisa amagama angukhiye kubaluleke kakhulu, kodwa kufanele uqonde umehluko phakathi kokusetshenziswa kwamagama angukhiye kanye nokugxila kwegama elingukhiye. Ngivumele lapha ngikutshele ukuthi zindlela ezimbili ezihlukene ze-SEO. I-Google ishaywa phansi ngokugxilongwa kwegama elingukhiye kodwa ithanda ama-athikili aqukethe izinombolo ezifanele nezinengqondo zamagama angukhiye.
Ngakho-ke, kufanele ucabange ngamagama akho angukhiye ngokuhlakanipha futhi ungasebenzisi amagama amaningi kanye nemishwana esigabeni esifanayo. Akumelwe neze ugxile kubhobho ye-SEO ekhomba amasayithi futhi ucabange ukuthi inokwethenjelwa. I-Google inemithetho nemigomo yayo, futhi wonke umphathi wewebhu kufanele abalandele uma efuna ukufezekisa imiphumela efunayo.
Indlela yokulinganisa amagama akho angukhiye?
Ngaphandle kwamagama angukhiye abalulekile, akufanele usebenzise imishwana ephazamisa ukugeleza kokuqukethwe kwakho. Ama-blogger ahlukahlukene kanye ne-webmaster bagxile kumazwi angukhiye nemishwana, kodwa kufanele ugcine ukubaluleka kwegama elingukhiye kusuka kwamaphesenti amabili kuya kwangu-4 kuphela. Ungasebenzisa i-Google's synonym database ukuze uzigcine usesikhathini ngalokho u-Google akuthandayo kakhulu nokuthi ukwandisa ukuvezwa kwakho kwi-intanethi.